I-Raw Oxiracetam Powder (62613-82-5) Abavelisi-i-Phcoker Chemical
I-Raw Oxiracetam powder ifundwe njengonyango olunokubakho lokulahleka kwememori okunxulumene nesifo se-Alzheimer kunye nezinye iindlela zemithambo-luvo ……….
I-Oxiracetam powder (Rax 62613-82)
I-powder Oxiracetam ebomvu (62613-82-5) Suqobo
Igama lemveliso Oxiracetam powder
Igama leKhemikhali 2- (4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl) i-acetamide
Inani leCAS 62613-82-5
I molecular WSibhozo 158.15
Ukuxuba Point 165-168 ° C
I-Biological Half-Life iiyure 8
Aukuguquka Nootropic. I-Analog yePiracetam kunye nomsebenzi we-psychostimulant.
I-Oxiracetam powder emfutshane (62613-82-5) Inkcazo
I-Oxiracetam powder i-ravetam i-Piracetam kwaye ivuselela inkqubo ye-nervous central, ikhuthaza ubuchopho be-mental metabolism, inyuke kakhulu kwaye ikhuthaze ukugcinwa kwememori, kwaye isebenza ngokugqithisileyo imemori engqondweni kunye nokwehla kwengqondo. Isetyenziselwa ukuphatha ingqondo yengxaki yokugula kwengqondo kunye neengxaki zengqondo. Iyakwazi ukuphucula imemori kunye nokufunda izigulane ezinokugula ngengqondo okanye ukukhathazeka kwememori. Kufanelekileyo ukunyanga i-neural ukungasebenzi, ukuphazamiseka kwememori kunye neengxaki zengqondo ezibangelwa umonakalo wengqondo. Ingasetyenziselwa kwakhona njengonyango lokuphulukana kwe-neurosis, ukulimala kwengqondo, i-encephalitis kunye nezinye izifo zengqondo. I-Oxiracetam enkulu yepowder inzuzo kakhulu kukuba inqabile kakhulu emanzini, okwenza ukuba ifanelekile kwijoyi. Uphando lubonisa ukuba i-Raw Oxiracetam ipowder inomsebenzi ophezulu wezonyango kunye nemiphumo ebalulekileyo yokunciphisa i-Piracetam.
Oxiracetam powder (62613-82-5) Indlela yokuSebenza
I-Oxiracetam sele ikhuselekile ngokukodwa kwi-amnesia eyenziwa yi-amnesia ebantwini kunye nakubantu, isichazela ukuba inokunceda ukubuyisela ekuxhatshaxisweni okudliwayo kunye nezinye izinto ezingaboni kakuhle ngokugcina amazinga akwaneleyo e-acetylcholine njengendlela yokuqala.
I-Oxiracetam iboniswe ukwandisa ukukhululwa kwe-acetylcholine ngaphakathi kweeseli ze-hippocampal. Njengoko u-acetycholine ubandakanyeka kumsebenzi wokuhlanganiswa kweememori, oku kungenza i-akhawunti yayo ibe nemiphumo ye-nootropic.
benefits of Oxiracetam powder (62613-82-5)
kucetyiswa Oxiracetam powder (62613-82-5) Isistim
Imiphumela of Oxiracetam powder (62613-82-5)